Ekoadaoro: Ny taona 2009 ho an’ny tontolon’ny bilaogy Ekoadaoreana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 4:31 GMT
Nanam-panantenana betsaka ho an'ity taona vaovao ity (2010) ireo bilaogera Ekoadaoreana. Taorian'ny firariantsoa nentim-paharazana ho an'ny taona 2010, dia hiverenana sy hisaintsainana ny taon-dasa (2009). Nanoratra lahatsoratra famintinana tamin'ny antsipiriany tao amin'ny bilaoginy Bitácora de Calú momba ny zava-nitranga tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ekoadaoreana, isam-bolana, nandritra ny taona 2009 ilay bilaogera Carlos Correa. Nanasa ireo mpamaky azy hanampy, ao amin'ny fizarana voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra, ny hetsika manan-danja rehetra na fihetsiketsehana rehetra izay hadinony izy. Mamintina izany ity manaraka ity .
Nandray anjara betsaka tamin'ny hetsika mifandraika amin'ny teknolojia ireo Oniversite nasionaly toy ny Oniversite Teknika tao Loja (UTPL amin'ny teny Espaniola), izay nampiantrano ny Kongresy CAMPUS voalohany sy ny Sekoly Ambony Politeknika Amoron-tsiraka (ESPOL amin'ny teny espaniola) izay nanohana ny Facebook Developer Garage (atrikasa Facebook ho an'ny mpandrafitra an-tserasera) tao Guayaquil.
Ankoatra izany, dia maro ireo tranonkala tao an-toerana no nisy nijirika tamin'ny taona 2009, amin'ny ampahany noho ny anaran-tsehatra marefo ao Ekoadaoro (nic.ec) . Toy izany no nahatonga ny tranonkala ao amin'ny Birao Nasionaly ho an'ny Fiarovana Ara-tsosialy, ny Teathra Nasionaly ao Sucre sy ny Sekoly ary ny Sekolin'ny Mpanamory ao Ekoadaoro lasibatry ny fanafihan'ny piraty. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra tamin'ny taona 2009 rehetra akory no lasibatra toy izany .
Nisy ny fihaonana vitsivitsy nataon'ny bilaogera nandritra ny taona, sy ny Fihaonan'ny Fampitam-baovao An-tserasera Voalohany nokarakarain'ny Ciudadania Informada (Fampitam-baovao ho an'ny Olom-pirenena) ary ny Seminera Anaty Tambajotra Sosialy ho an'ny Hoavin'ny Serasera any Ekoadaoro izay vatsian'ny Fundapi vola ihany koa. BarCamp miisa dimy no natao ary nahitana fahombiazana tao an-tanàndehiben'i Quito, Guayaquil, Santa Elena, Milagro, ary Loja .
Hetsika maro hafa no namelona ny tontolon'ny bilaogy Ekoadaoreana tamin'ny taona 2009 ary nasongadin'i Correa:
* Ny fifohazan'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy EcuaBlogs izay tantanan'i Max Souffriau
* Ny zava-nitranga samihafa, ny fianjeran'ny fiaramanidina kely iray tao an-drenivohitra, Quito, izay notantarain'ny mpisera tao amin'ny Twitter.
* Ny famoronana ny podcastEC, izay mitantara amin'ny rakipeo, ny sehatry ny teknolojia sy ny tontolon'ny aterineto.
* Ny fanombohana ny hetsika Iguana Valley , “vondrom-piarahamonina an-tserasera misokatra, natsangana mba hanentanana sy hanohanana ny hetsika manodidina ny teknolojia vaovao, ary hampiroboroboana ity sehatra ity any Ekoadaoro.”